Miyaynu jileynaa ama aan sugeynaa isbedelka cimilada? | Saadaasha Shabakadda
Isbedelka Cimilada ayaa ah khatarta ugu xun ee meeraha Dunida iyo aadamuhu ku sugan yihiin. Waxaa jira hadal heyn badan oo ku saabsan warbaahinta oo ku saabsan isbedelka cimilada. Sababaha sababta ay u asal ahaato, saamaynta ay ku yeeshaan dabeecadda iyo aadanaha labadaba, iwm. Taasi waa sababta aan u dhihi karno dhibaatada aan la kulanno mustaqbalka, oo aan horeyba u aragno cawaaqibka, waxay leedahay baaxad weyn oo aad u muhiim ah.
Had iyo jeer, markaan ka hadlayno isbeddelka cimilada iyo kuleylka adduunka, waxaan ka hadleynaa jiilalka mustaqbalka oo aan awood u siin karno mustaqbal rajo leh oo waara. Si kastaba ha noqotee, Waxaan durba aragnay saameynta isbedelka cimilada. Abaaruhu way sii kordhayaan, dhacdooyinka cimilada ee aadka u daran ayaa ah kuwa soo noqnoqda oo waxyeelo badan, heer kulka ayaa kor u kacaya adduunka oo dhan, maalin walbana meeraha ayaa leh kala duwanaansho yar.
Dhacdooyinka maanta dhaca ee la xiriira isbeddelka cimilada waxay leeyihiin baaxad ka weyn tan lagu qiyaasay saadaasha ay sameeyeen saynisyahannadu. In kasta oo ay jiraan dedaalo ay warbaahintu uga digayso isbedelka cimilada, haddana waxay u muuqataa taas fariimaha digniinta ah ma gaarayaan dadka. Muwaadiniintu waxay leeyihiin dhibaatooyin u dhow inay ka qaybgalaan oo ka welwelaan. Marka laga hadlayo hoggaamiyeyaasha siyaasadeed ee dalalka, farriintu uma muuqato inay isagana helayso, maxaa yeelay waxay leeyihiin maskax horumarineed oo muddo-gaaban ah.
22-kii Abriil, 155 waddan ayaa kala saxeexday Heshiiska Paris ka dhanka ah isbedelka cimilada. Munaasabadan ayaa lagu qabtay xarunta Qaramada Midoobay ee magaalada New York waxaana lagu calaamadeeyay ka hor iyo kadibba la dagaalanka isbedelka cimilada heer caalami. Heshiiska ayaa dhaqan galaya hal mar in ka badan 55 dal oo matalaya ugu yaraan 55% idaacadaha ayaa dhigey aaladda ansixinta, taas oo caadiyan soo marta heshiiska baarlamaanka. Si kale haddii loo dhigo, mas'uuliyadda heshiiskii Paris in la sii wado oo la helo natiijooyin waxay ku xiran tahay inta badan waddammada sii daaya hawada ugu badan ee qiiqa hawada ku sii daaya.
Dadaalka siyaasadeed ee lagu joojinayo isbedelka cimilada ayaa ah mid aad u yar
Sida had iyo jeerba, dalalka ugu nugul waxay leeyihiin xaalado deg-deg ah oo ka duwan kuwa waddamada horumaray. Taasi waa, deg-degga dalalka soo koraya kuma soo beegmayso danaha dalalkaas oo leh dhaqaale ka awood badan. Mar labaad waxaan helnaa xaalad ay kuwa ugu saameynta badan saameynta isbedelka cimilada ay yihiin kuwa ugu codka iyo cod yar leeyihiin marka ay timaado xallinta
Waan ognahay inaan jabinayno rikoor heerkulka adduunka ugu sarreeya tan iyo markii cabbiraadda heer kulka ay billaabatay iyo xitaa sidaas, xalalka la dejiyey buuxin shuruudaha loomana fuliyo si dhakhso leh si loo yareeyo ama loo joojiyo saamaynta isbedelka cimilada. Sannadkan 2016 wuxuu ku bilaabmay heerkul aan caadi ahayn oo ka sarreeya xitaa sanadkii hore, si kastaba ha noqotee, dadaallada lagu yareynayo tan ayaa ah kaliya tanaasullo liita oo isku dayaya in aan laga dhaafin kororka laba-heer ee heer kulka adduunka.
Abaaruhu way sii dheeraanayaan waana soo badanayaan
Waxyaabaha ugu dhibka badan ee heshiiskan ayaa ah in nasiib daro, in kastoo ay dejiyeen ujeeddo caalami ah oo qasab ah, dalalka waajib kuma aha inay gaaraan himilooyinkaas. Taasi waa, haddii maanta, waddammada saxeexaya Heshiiska Paris aysan ku guuleysan ujeeddada la aasaasay, heerkulka celceliska adduunka ayaa kor u kici doona saddex darajo.
Aragtida ayaa ah mid aad u xun oo loogu talagalay dalalkaas ay ku dhacaan abaaraha ba'an ee keena dhibaatooyinka waaweyn ee bulshada iyo caafimaadka sida abaaraha, cudurada, daadadka ba'an ee ku qasbaya ka tagista guryaha, iwm. Saamaynta isbeddelka cimilada ayaa si sii kordheysa loo sii xoojinayaa, waxaan markhaati ka noqon doonnaa abaaro dheer iyo kuwa daran, waxyeelo badan iyo daadad joogto ah, hase yeeshe, kuwa xoogga leh Kaliya waxay raadiyaan lacag iyo danahooda gaarka ah.
Warbaahintu waxay sameysaa wax kasta oo suurtagal ah si ay ugu wargeliso dadweynaha saameynta isbedelka cimilada
Taasi waa sababta adduunku ugu baaqayo astaamo siyaasadeed oo dheeri ah, ficillo badan oo milicsiga iyo sinnaanta ah, u damqasho badan waddamada sida degdegga ah ugu baahan isbeddelada isla markaana dammaanad qaadaya in si wax ku ool ah loo yareeyo qiiqa gaaska lagu sii daayo. Hawsha aan sugeyno ma sahlana, laakiin waa deg deg waana lama huraan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Saadaasha hawada » Isbedelka Cimilada » Miyaynu jileynaa ama aan sugeynaa isbedelka cimilada?